Fanafihana tany Ampefy : dimy lahy voasambotry ny zandary teny 67 ha | NewsMada
Fanafihana tany Ampefy : dimy lahy voasambotry ny zandary teny 67 ha
Jiolahy miisa dimy no voasambotry ny zandary miasa ao Ankadinondry sy Analavory teny amin’ny 67 ha, ny 2 novambra teo. Tohin’ny vokatra efa azo teo aloha ihany izao, ary mbola misy ny karohina.
Araka ny fanazavan’ny zandary, fanohizana ny fikarohana ireo jiolahy nanafika tany Ampefy sy Ankadinondry tamin’ny herinandro lasa teo sy ny famonoana ny ben’ny tanànan’Ampefy volana vitsivitsy lasa izay, ity nahitam-bokany ity. Basy lava iray sy poleta iray ary bala roa no sarona tamin’izy ireo ankoatra ny zava-maranitra maro fitondran’izy ireo manafika.
Raha tsiahivina fa ny 28 hifoha 29 oktobra lasa teo, tokony tamin’ny 1 ora maraina no nisy nanafika ny mpivarotr’omby iray mipetraka ao Ankadinondry. Miisa folo mahery ireo jiolahy nanafika tamin’izany, mitsioka kiririoka izy ireo rehefa tonga teo amin’ilay trano ho tafihina ary niditra avy hatrany. Nizara telo izy ireo, ny efa-dahy niditra tao amin’ny rihana voalohany, ny efa-dahy tao amin’ny rihana faharoa, ny ambiny kosa nijanona teny ivelany .
Novonoin’izy ireo tamin’ny antsy ny raim-pianakaviana iray tao rehefa nanohitra ary lasa tamin’izany ny findain’ny vadin’ny maty. Nanampy ny namany tao amin’ny rihana faharoa izy ireo rehefa vita izany ka nalain’izy ireo tamin’izany ny kojakojan’ny mpianatra sy bicyclette ary vola mitentina 1.060.000 Ar.
Ny alahady 29 oktobra, tokony ho tamin’ny 10 ora alina, nisy fifandonana ka iray no lavo. Nisy ny voasambotra tamin’izany, ka teo no nanondroan’ny tratra fa misy amin’ireo jiolahy eny 67 ha. “Mbola mitohy ny fikarohana ireo namany hafa tsy mbola tratra amin’izao fotoana. Marihina fa ireo telo tratra tany Ampefy, efa voatazona vonjy maika ao amin’ny fonjan’Arivonimamo”, hoy ny zandary.